TSY MILA AN-DRAJOELINA IZAHAY – MyDago.com aime Madagascar
TSY MILA AN-DRAJOELINA IZAHAY
Hetsika lehibe rahampitso no tanterahin’ny Ankolafy Ravalomanana eny amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka. Araka ny nambara teny an-kianja dia fotoana izay hanaovan’ny zanak’i dada ny fetin’ny krismasy io rahampitso io. Hisy ny fizarana vatomamy ho an’ireo olona
rehetra izay tonga eny an-toerana. Noho izany dia nanentana ny vahoaka ho tonga maro ny mpitarika. Fa androany dia mbolanitohy ny hetsika teny an-toerana. Anisan’ny anndray fitenenana tamin’izany ny Ct Ranaivorazo Fenomanjato. Nambarany fa efa misy mangirana kely ny fandresen’ny tolona satria efa misy miaramila nivoaka ny fonja. Midika izany hoy izy fa efa folaka ilaikely. Tsy vahaolana hoy izy na hilatsaka na tsia Rajoelina. Ny tetika tiany atao dia ny tsy handrava ny tetezamita. Tsy vonona hanao fifidianana izy. Nilaza i Feno fa tsy mila Rajoelina izahay ary tsy hanao irery i Madagasikara. Rehefa tsy voavaha ny krizy hoy izy dia tapi-dalankaleha ary miady an-trano. Misy fetrany ny fanaparam-pahefana. Ny Ct Rasoanoromalala Horace kosa dia nanambara fa aorian’ny 08 mars vao hanome valinteny Rajoelina. zany ve hoy izy dia manarampenitra. Natao ny hopitaly , ny kianja, manaram-penitra kanefa tsy ilain’ny vahoaka. Maninona no tsy sahy manome valinteny manaram-penitra sa maindry mpanolontsaina gaingilahy. Rehefa tsy hanao dia avereno amin’ny tompony ny hoe manaram-pneitra satria voambola nampiasain’ny filoha Ravalomanana Marc izany. Ny
ilain’ny vahoaka izao di asakafo manaram-penitra
TSY MAINTSY MANDRESY ISIKA
RAJOELINA NO MIVAROTRA TANINDRAZANA
Mila hetsika hitam-bahoaka sy misy fiantraikany !
Auteur Solo Razafy*Publié le 21 décembre 2012 Catégories Politique
3 pensées sur “TSY MILA AN-DRAJOELINA IZAHAY”
TARATASY MISOKATRA HOAN’NY OLON-DRAVALOMANANA AO AMIN’IO FITONDRANA IO, HAFATRA HOAN’NY MALAGASY
Envoyé par: BARYNJAKA (Adresse IP journalisée)
Date: ven. 21 décembre 2012 19:44:53
Gaga ary tena talanjona ny tenanay raha nahare fa tapakevitra tsy hilatsaka i Ravalomanana. Tena nivadika ambony ambany ny rasa. Zay anefa moa no hitany fa mety ka dia nataony. Ny tena loza anefa dia ity: na dia efa mandady rariny tahaka izany aza i Ravalomanana dia mbola midingin-drambo tsy manaiky ny hiverenany ny Fat sy ny namany. Dia hoy aho hoe fa dia ahona loatra? Raha totohondry tsy mivokina amin’izany dia maty hozatra hoy ny fiteny. Ka izao no hevitra homeko fa toa variana amin’ny seza mafana ireto ankolafy Ravalomanana ka tsy mahita izay tokony hatao intsony.
1- Efa nanao fanetren-tena goavana ny filoha Ravalomanana ary mitaky valiny avy amin’ny fat izany dia ny famelana azy hody tsy misy rahoraho.
2-Raha tsy manaiky an’io ny faty fa mbola mihizingizina dia izao no atao.Mametraka ultimatum une semaine amin’ny faty mba hamerina ny filoha eto Madagasikara ary raha tsy voahaja io dia manao demission fahobe ireo olon-dravalomanana rehetra ao amin’ny fitondrana ary mitokona eny amin’ny magro daholo. Raha sahy manao an’io ny ankolafy dia hihetsika ny cominauté international satria izy ireo dia resy lahatra fa i Rajoelina no sakana. Tsy mila ady hevitra io fa dia fanampahan-kevitra ary tokony samy ho sahy fa tsy hatahotra seza very.
21 décembre 2012 à 21 h 03 min
EFA EFA TAONA IZAO DIA MBOLA HIHONINA @ MANGIRANA KELY VE NY VaHOAKA R I CT SY CST ,
« Ct Ranaivorazo Fenomanjato. Nambarany fa efa misy mangirana kely ny fandresen’ny tolona satria efa misy miaramila nivoaka ny fonja. »
hATAO RAJOELINA NO TSISY SAINA FA NY ANAREO KOA Dia mahalasa hritreritra.
AMIKO DIA HOMPA HOAN NY VAHOAKA IO MANGIRANA KELY IO ./.
22 décembre 2012 à 6 h 10 min
Ny hetsika hanehoana an’izao tontolo izao fga mila ny filoha Ravalomanana ny malagasy dia mety ho sarotra satria efa novolena t@ mpitolona fa am-pilaminana ny tolona atao. Maranak’izany dia raha hetsika lehibe ao @ MAGRO dia tsara fa tsy ampy velively satria ho lzaina fa tsy vahoaka ireo fa ampahany. Kanefa tsy mifanaraka @ ireo mpanohatra an-dRajoelina ny ankolafy Ravalomanana ka sarotra ny hitarika olona.
Ny fialana ao @ io fitondrana io kosa dia tokony hatao manomboka @ iny volana ambony iny hanerena ny rehetra.
Farany, raha tsy misy Marc Ravalomanana ny fifidianana dia izay rehetra nandray anjara t@ fanoganam-panjakana sy izay nandray anjara @ io tetezamita sandoka io dia tsy misy mahazo milatsaka avokoa.
Précédent Article précédent : RAVELONANOSY MAMITIANA : MISAVOROVORO NY SAIN-DRAJOELINA
Suivant Article suivant : RAKOTOARIVELO MAMY : HIROTSAKA HO FIDIANA